Ukubukeka imoto Kia Venga eqinisweni Kwatholakala akamuhle ejwayelekile izimoto Asian. Nakuba akufanele kusimangaze ubani? Impendulo yomsebenzisi imodeli nje langa, impumelelo yayo commercial kungenziwa wayenomona bezinhlangano abaningi abadumile. Phela, kusukela umakhi-Korean kuphela igama ilebuli hood kanye nokutshalwa kwezimali. van Compact waya Akumangalisi-Europe - ubunjiniyela yayo kanye nomklamo ehilelekile ochwepheshe isiJalimane, ngubani wamnika igama Spanish, futhi inhlangano kwalesi imodeli Namanje olwenziwa e-isitshalo eSlovakia.
Izivakashi abadlala imithetho
Ngakho-ke, i-auto akusho bungakhiphi ngakho nobuntu ukubukeka Asian, ngokushesha Ubamba iso kwezinye brand - compact crossover, le Kia Soul kanye nabanye, ngokushesha Ochwepheshe ukuthuthukiswa bekwi ukukhathazeka-Korean. Ngokungafani izihlobo zabo, "Kia Veng" elingenalo noma iziphi izifiso Eastern. Ngakho-ke, alihlangani khona emgqeni esiqinile oluxube lefanele, ungalibalekeli. Phela, imodeli "Kia Veng", izithombe okuyizinto izimoto nabanomusa esimnandi nge kancane funny futhi Puffy "ukubukeka", esidalelwe emakethe yamazwe aseYurophu ngohlobo nenqubo okuhluke kakhulu.
Mal ngaphandle - volumetric ngaphakathi
Kodwa ngaphandle kwalesi imoto kuyadukisa. Naphezu Ubukhulu bayo icwecwe kanye sobala usayizi encane, base okuzenzakalelayo ezingaphezu kuka ngesikhathi Soul efanayo. Ukuze umshayeli nabagibeli kuyinto Ubukhulu yangaphandle kakhulu encane, kodwa gumbi ukhululekile okuyinto kahle yokuhlala abagibeli abane kanye nomshayeli. Umkhiqizi akazange bayakhohlwa izimoto Umnotho, ukunciphisa ukumelana mass emoyeni njengoba ihamba ngokusebenzisa Coefficient umzimba hudula ukugeleza, okuyinto ingeqi 0,31. Yiqiniso, lokhu imodeli ezisemadolobheni akuyona nokujaha ukusebenza, okuyinto asethwe ku "Formula 1", kodwa lezi zibalo kusize ekunciphiseni petrol ngu 7-8 amalitha, kuye ngokuthi izimo yokusebenza.
Ngesisekelo "Kia Veng" wabeka izinkomba ezahlukene ngokuphelele - ukusebenza kanye Ergonomics ye gumbi, ngokwesikhundla sakhe futhi esibalulekile. Auto ikuvumela ukuba uhlale kalula kuyo, ngisho nabantu engaphezudlwana ukukhula isilinganiso manje 190 cm nokuningi - akusiwona inkinga. Ngaphezu ozikhethela "Kia Veng" setha kophahla panoramic, okuyinto eyenza ibe banzi ubukhulu elingaphakathi unezela ethambile ukukhanya yemvelo. Nokho, kukhona sinazo - kuya somoya emotweni baya kude. Lokhu kwenza ukuba abantu okuthunyelwe -pillars kangangokuthi Uhlolojikelele ukuyaphi komshayeli. Ngaphezu kwalokho, lokhu imodeli zenzelwe ukusetshenziswa endaweni ezisemadolobheni ukuthi uboniswa mpo, yebo, lapho naniyingcosana "taburetochnoy" emalungiselelweni wokuhlala akuzona kunikela elide zokuhamba amazwe. Mhlawumbe abanye bawo izihlalo akunakubangelwa ukuntuleka ukwesekwa lateral, ukuntuleka okuyinto kwaphawuleka ngokukhethekile emabhange abasafufusa. Ngesikhathi esifanayo usofa ezingemuva kungenziwa kalula wathutha eduze komzila Umhlahlandlela at ibanga cishe 13 cm, okuvumela abagibeli ukuzizwa ekhululekile - legroom uhlala ngokweqile, futhi iminyango ensikeni ayigcini qala noma ukwehla e "Kia Veng". Photo salon imoto kalula ukukholisa abagxeki we nokuqina ka iziqinisekiso ezinjalo.
Umthamo futhi icwecwe
Uma kukhona isidingo ukuthutha izimpahla besiyoba sikhulu futhi kube umthwalo akwanele, izihlalo phinda kalula phansi, ekudaleni isikhala eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, engxenyeni ezingemuva "Kia Veng" inikeza niche lapho kudingeke khona embondelene amathuluzi multi-functional nezinye okudlekayo.
imithelela kanye nabasebenzisi bomgwaqo Environmental
Abaklami European abakakhohlwa mayelana nendlelanchubo yetinhlobo siyinhloko ukuphepha emotweni. Phela, ngokuvumelana imiphumela ukuphahlazeka, lokhu imodeli wathola isilinganiso eliphakeme - 5 izinkanyezi by EuroNCAP uhlelo. Abakhiqizi besuka eSlovenia futhi wanakekela ukuthola izitifiketi LCA, okuyinto ukhombise okungenani imoto nomthelela imvelo ngesikhathi zonke izinkathi ukuphila kwakhe, kusukela ukukhiqizwa design ekuchitheni.
Yiqiniso, Awuzibanga namandla amayunithi "Kia Veng", ezibekiweko lobuchwepheshe lapho akhethwa kucatshangelwa isisindo imodeli, kusukela ukonga 75-amahhashi uphethiloli injini turbo diesel ukuze 128 amalitha. a. Behlangabezana nalezi zimpawu zokuhlola esiqinile ngoba kwekhabhoni ezisebenza Euro 5. Ngaphezu kwalokho, abanikazi abaningi bayazisa izinzuzo uhlelo Stop & Hamba, esihlinzeka elilungile petrol sezimoto ezisemadolobheni. Futhi izixazululo ezithakazelisayo okuhloswe ngaso ukusebenza kahle, steel version manual transmission yencwajana umsizi electronic, okusikisela isidingo bayeke ukunciphisa ukusetshenziswa uphethiloli noma diesel lenhlanganisela. Loku umshayeli ezolile, kulinganiswa ukushayela isitayela. Nakuba landela iseluleko umsizi ukunyakaza Dynamics zingajabuli, kubalulekile ukubheka ngokwesilinganiso uphethiloli ukusetshenziswa kwe-on-ebhodini ikhompyutha, kanye ukubukwa ziyashintsha, ngoba kulula kakhulu lesi sikhwama.
Emotweni base alummangazi ingcebo imishini kanye nomklamo ukuhluzwa, kodwa mayelana version ephezulu ekupheleni "Kia Veng" abasebenzisi bayo libuyekeza kuyiwa. Ngakho, abanikazi waphawula isondo i ergonomic ayo, yokupaka izinzwa uhlelo esimenza abone into engemuva ikhamera exchange rate ukuzinza kanye cruise control, amandla izesekeli nge yesimanje abezindaba uhlelo kanye hands-free. Ngentengo sokuqala sale nguqulo kusukela 770 000 laya ku-800 000 deda. kunengqondo ukuba banake kuso.
Ukulungisa "Solex" (umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli). Kit carburetor "Solex"
Peony kusukela foamirana: Master Class
Indlela ungeza umsebenzisi Windows 10: imithetho embalwa elula
Foundation 'L'Oreal': izinhlobo eziyinhloko
Wamafutha "Evamenol": yokusetshenziswa zomuthi. Izibuyekezo futhi intengo